गोविन्द केसीलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगे बाबुराम भट्टराई | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more गोविन्द केसीलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगे बाबुराम भट्टराई
पुस २५ गते, २०७४ - ०९:१३
काठमाडाैं । हिजाे अदालतको अबहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । मंगलबार बिहान सिंहदरवार वृत्त पुगेर भट्टराईले केसीलाई भेटेका हुन् ।
भट्टराईले केसीको अभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै अन्तिम समयसम्म साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले खबरडबलीलार्इ जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले चार वर्ष पुरानो मुद्दामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बर्खास्त गरिएका डिन डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन बसेका केसी सोमबार पक्राउ परेका हुन् ।
पुस २५ गते, २०७४ - ०९:१३ मा प्रकाशित